Taliyihii Ciidamada Ahlusuna oo ku dhintay dagaalkii Godinlabe | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wararka ka imaanaya degmada Dhuusa Mareeb ayaa sheegay in Taliyihii ciidamada Ahlusuna Axmed Maxamed Odawaa (Axmed Dheere) uu ku dhintay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Godinlabe ee Gobolka Galgaduud.
Dagaalka oo labo jeer ka dhacay deegaanka ayaa markii hore waxaa uu u dhaxeeyay Ciidamada Galmudug iyo maleeshiyo hubeysan, waxaana dagaalka ku soo biiray Ciidamo ka tirsan Ahlusuna oo taageerayay Maleeshiyada hubeysan.
Saraakiil ka tirsan Ahlusuna ayaa sheegaya in Taliyaha Ciidamada Axmed Dheere uu ku dhintay dagaalkii dhacay duhurnimadii maanta.
Sidoo kale Wararka ka imaanaya Gobolka Galgaduud Ee bartamaha Dalka ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaalkii Maanta ka qarxay Deegaanka Godinlabe uu ku dhaawacmay Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Ahlusunna.
Sheikh Saadaq Yuusuf Direed oo ah Madaxweyne Kuxigeenka Maamulka Ahlusunna ayaa ku dhaawacmay Dagaalka deegaanka Godinlabe sida ay Masuuliyiin katirsan Maamulka Ahlusunna caawa ay inoo xaqiijiyey.
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo galabta gaaray deegaanka Godinlabe, kaddib markii ay isaga baxeen Ahlusuna ayaa la sheegay in mar kale dagaal ay soo qaadeen.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Madaxweynaha Galmudug uu dib ugu laabtay degmada Cadaado oo xarun KMG u ah Maamulka Galmudug.
Xiisad iyo dhaq dhaqaaq ciidan ayaa laga dareemayaa magaalooyinka Dhuusa Mareeb iyo Cadaado, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalo hor leh inuu deegaanka ka qarxo.
Xaalada deegaanka Godinlabe ayaa haatan degan, waxaana ka barakacay dadkii ku dhaqnaa, kuwaasoo u cararay deegaanada fog ee miyig ah.